Izindaba - Izisulu zokudutshulwa kwabantu abaningi zeFedEx zithola uxhaso esikhwameni somphakathi
Kudlule amasonto ayisithupha e-Indianapolis-six selokhu indoda yesibhamu ibulale abantu abayisishiyagalombili esikhungweni seFedEx ground e-Indianapolis.
Ngaleso sikhathi, umphakathi ubumbene ukuxhasa izisulu, abasindile nemindeni yabo, futhi waqoqa imali engaphezu kwezigidi eziyi- $ 1.5.
"Uma lezi zigameko zenzeka, abantu bazizwa bengenalutho futhi befuna ukusiza," kusho uJeffrey Dion, umqondisi omkhulu weNational Sympathy Foundation.
INational Sympathy Foundation iqoqa iphinde isabalalise iminikelo yesihle ngemuva kobugebengu obukhulu obunodlame obenzekile.
Lokhu kubandakanya umndeni kamufi, abalimele nabantu abakhona. Isikhwama sizohlala sivulekile amasonto ambalwa.
Ngemuva kwalokho, umphakathi oqondisayo wendawo uzobamba umhlangano ehholo lomphakathi lomphakathi ukuze kwenziwe imithetho yokuphathwa kwesikhwama.
U-Aasees Kaur, oyi-Legal Client and Community Services Manager weSikh Union, uthe: “Kuyathinta kakhulu ukwazi ukuthi abantu basazinaka izidingo zemindeni ethinteke kakhulu.”
"Siyazi ukuthi umhlaba wabo awukashintshi, futhi nosizi lwabo luyoba lude futhi lube nzima," kusho uKaul.
"Thola ukwesekwa okuningi ngangokunokwenzeka emphakathini omkhulu, futhi sizoba ngcono," kusho uKaul.
I-Copyright 2021 Nexstar Media Inc. wonke amalungelo agodliwe. Lokhu okubhaliwe kungenzeka kungashicilelwa, kusakazwe, kubhalwe kabusha, noma kusatshalaliswe kabusha.
I-Indianapolis-Wonke umuntu kufanele azizwe ephephile ekhaya lakhe. Lolu wulwazi izikhulu ze-IMPD kanye nomqondisi omkhulu we-Indianapolis Housing Authority abaluhlanganyela nomakhelwane ngesikhathi somcimbi wokuqala "we-Barbecue and Chill".
Lapho izingane zibuyela emphakathini waseBlackburn Terrace kusukela ngosuku lokugcina esikoleni kulo nyaka, zihlangabezane nepikiniki nemidlalo enikezwe yi-IMPD ne-IHA. Ukubuyela emuva kwe-Indianapolis Colts yaseNiheim Hines nakho kufike kulo mcimbi.
I-Indianapolis - Uma ungazange uye kwaBankers Life Fieldhouse muva nje, ungamangala ngokuzayo lapho ufika enkabeni yedolobha.
Isikhathi sokwakha siyaqhubeka, kanti ukujabula kwabalandeli kuthathelwe indawo ukuduma kwemishini esindayo. IPacers Sports Entertainment Group ithe izoba “yinsimu yekusasa”, ivulela indlela wonke umuntu, hhayi abalandeli be-basketball kuphela, ukuba bayijabulele.
Indianapolis - Iziphathimandla zifuna usizo lomphakathi ukuthola owesifazane oshiye isikhungo sezokwelapha eMorgantown.
Isikhathi sokusebenza seGuangzhou sinikezela ngemikhumbi yamazwe omhlaba ye-DHL / FedEx / UPS / TNT